Accueil > Gazetin'ny nosy > Trano narodana etsy Behoririka : Mbola nisy kolikoly koa tamin’ny fandrodanana?
Trano narodana etsy Behoririka : Mbola nisy kolikoly koa tamin’ny fandrodanana?
Nanaitra ny mpandalo sy ny eny amin’ny manodidina ny Sekoly Fanabeazana Fototra (Epp) etsy Behoririka ny nahita ny fahatongavan’ny fitaovam-be (bulldozer) sy ny mpitandro ny filaminana ary ny vadin-tany nandrava ilay tranom-barotra tsara tarehy vao vita etsy anoloan’io sekoly etsy Behoririka io ny alakamisy teo. Nanaitra satria vita tsara tokoa aloha ilay tranom-barotra, saingy noho izy tsy ara-dalàna, hono, no nandrodanana azy.
Nanaitra ny maro koa anefa fa rehefa nanakaiky ny mitatao vovonana ny andron’ny alakamisy nanaovana izany fandrodanana izany dia nitsahatra ilay izy. Ny rindrina ambany aloha dia efa rava avokoa.
Re ny faran’ny herinandro teo fa raha voatanisa tetsy sy teroa nandritra ny fotoana maro, indrindra fa nandritra ny raharaham-pitsarana ny hoe “tsy fantatra mihitsy ange hatramin’izao ny olona tena nividy ny Ceg Analamahitsy sy ny zaridainan’Antaninarenina ary ity nanangana etsy Behoririka ity”, dia re fa “olona akaiky ny mpitondra fanjakana ambony ankehitriny no tompon’ilay etsy Behoririka aloha”, ary izay no antony nampitsaharana tampoka ny asa fandrodanana teo. Dia io mampitampim-bava ny maro izay mandalo io ny endrik’ilay tranom-barotra.
Raha izany no marina dia mbola ho lavitra ny afo ny kitay amin’ity resaka “fanjakana tan-dalàna” ity e! Izany hoe, rehefa mpitondra fanjakana na manam-pahefana ara-panjakana na olona akaiky azy ireny na havany na namany sy ny sisa, dia tsy azo ampiharana ny lalàna izany! Mbola endrika ny kolikoly koa ange izany e!
Fa etsy ankilany kosa, lasa ihany ny fisainana ny amin’ny hoe nahoana re no navelan’ny mpitondra fanjakana teo aloha naorina ihany io tranom-barotra etsy Behoririka io nefa vao nofefena io toerana io ka nahatsikaretan’ny maro fa hanorenana dia efa niteraka resa-be ary nisian’ny fanamarihana mihitsy aza hoe “tsy ara-dalàna”. Nefa dia navela ho vita hatramin’ny farany ihany. Iza no nitsikombakomba tamin’izany? Tokony hampiantsorohana andraikitra koa ny fanjakana na kaominina satria namela ny famitana ny trano hatramin’ny farany.
Farany, izay tsy ny bitika indrindra koa dia ity. Tokony tsy hadinoina fa harena ny trano toa ireny. Fotodrafitrasa nialam-bola izy ireny. Izany hoe vola izany. Ka raha hita soritra fa tsy hampidi-doza kosa aloha, nahoana re no potehina ny vola? Nahoana no potehina ilay harena? Tsy misy vahaolana ankoatra ny famotehana azy ve? Ny tompon’andraikitra ara-panjakana nanome alalana ny fananganana azy na namela an’ilay trano hiorina sy ny tompony dia tokony hampiharana lalàna aloha, fa ilay fotodrafitrasa, “vola” na “harena” kosa, tsy rariny raha ravaina na potehina e!
Raha toa ka mitohy izao famelana an’io trano etsy Behoririka io amin’ny endriny ankehitriny, izany hoe ny rindrina ambany noravaina, dia vao mainka henatra sy fahafaham-baraka ho an’ny mpitondra, ary manaratsy endrika ny tontolom-piaraha-monina koa.
Azo atao tsara ny mandray an’io trano io ho tranom-panjakana, fa rehefa tsy potika ny vola na izy harena, dia efa zava-dehibe iray aloha izay.
Noho izany, izahay dia mihevitra fa tsara kokoa ny amerenana azy amin’ny laoniny noho izay hotohizana ny famotehana azy. Fa mba ho anatra ny ho avy kosa dia faizo araka ny lalàna velona izay rehetra nandika lalàna ka nampanao sy namela ny hanaovana an’io trano io ary ny tompony (raha manana fahefana tokoa ny tompon’andraikitra manandrify an’izany).